Tari-dalana feno ho an'ny fifindra-monina ao Dubai City, fanampiana fanampiana amin'ny UAE 🥇
Fitsipika feno ho an'ny fifindra-monina ao Dubai ⭐⭐⭐⭐⭐
Midira ao amin'ny WhatsApp Group ho an'ny Asa ao Dubai City
Oktobra 22, 2017
Recruiting amin'ny asa any Dubai Iza no hirotsaka an-tsitrapo? ⭐⭐⭐⭐⭐
Novambra 1, 2017
navoakan'ny Dubai City Company at Oktobra 30, 2017
Fitsipika feno ho an'ny fifindra-monina ao Dubai
Torolàlana feno ho an'ny fifindrana Dubai. Namboarina indrindra ho an'ireo mpikaroka momba ny asa iraisam-pirenena. Inona no azonao atao? manantena ao Dubai?. Betsaka ny zavatra kely azonao atao alohan'ny hifindranao any amin'ny United Arab Arab Emirates. Samy manana ny fananany avokoa ny renivohitra rehetra miabo sy negatives. Indrindra raha avy eo Moyen Orient. Tokony hamaky, ohatra torolalana amin'ny antsipiriany momba ny fomba ahazoana asa any Dubai. Etsy an-danin'izany, ataovy izay hahazoanao vola sy herim-po ampy hanomboka fiainana vaovao any Afovoany Atsinanana.
Manome torolàlana feno izahay nifindra tany Dubai. Mifindra any amin'ny firenena vaovao dia asa mahaliana sy mahatahotra. Amin'ny fotoana mitovy amin'ny ankamaroan'ny Ny mpivady dia mandray ity dingana ity mba hitadiavana asa tsy manana fahalalana tsara na azo ampiharina momba ny fomba fandehanana any an-toerana. Moa ve izany? ny toerana tsara indrindra ho an'ny mpizahatany manerana izao tontolo izao.
Tsara ny manamarika fa mihoatra ny 80% amin'ny Dubai ny mponina mipetraka sy miasa ao an-tanàna. Tonga tao an-tanàna tsy misy fampahafantarana mety momba izay tokony hatao. Mihoatra ny 70% of Ireo asa ao Dubai mpihaza dia mampiasa WhatsApp. Izay no antony tsara tokony hiomanana alohan'ny handaminana mialoha ny hiainga any Dubai. Mba hahafantarana ireo zavatra ilaina rehetra sy ilaina fampahalalana momba ny fomba fanaovan-javatra ary ny fomba tsara indrindra hanaovana izany. Ity atolotray anao ity a fitarihana feno ho an'ny nifindra tany Dubai.
Ny saran'ny fiainana any Dubai
Tari-dalana iray manontolo hoentina mankany Dubai ve izany ho anao?
Na dia i Dubai aza manolotra tontolo iainana tsy mandoa hetra fa ny vidin'ny mipetraka ao an-tanàna afaka mahazo kely vidiny. Noho izany, raha mitady asa any Dubai ianao hanomboka a asany ao, avy eo mila miantoka ianao fa handoa ny saram-piainanao ny karamanao. Ny faritr'i Dubai dia ekena ho tanàna lafo vidy indrindra hipetraka ao amin'ny Emira Arabo Mitambatra.
Ny vidin'ny monina any Dubai na ahoana na ahoana. Ampidiro foana ny trano sy ny fivarotana sakafo miaraka ivelan'ny tanàna. Nahafinaritra ny maka fialamboly sy ny fisoratana anarana ankizy an-tsekoly. Fanampin'izany, fitaterana miaraka amin'ny fiantohana fiara. Tonga daholo ny rehetra rehefa ianao nifindra nankany Dubai ho toy ny mpitsoa-ponenana indianina.
Tokony ho fantatrao fa ny vidin'ny fandaniana isan-taona ao amin'ny trano fiantsonana iray dia tonga amin'ny 62,000 AED. Tokony hanamarina anao ianao dingana ho an'ny fividianana trano fialamboly, indrindra any Dubai. Raha mila fampahalalana bebe kokoa momba ny vidin'ny fanofa any amin'ny Emirates Ny zavatra rehetra dinihina dia tokony hatao rehefa miara-mientana amin'ny fianakaviana ianao. Rahoviana entana nafindra tany Dubai tokony ho fantatrao fa ny vidiny fanampiny tsy azo ialana rehefa mipetraka any Dubai. Toy ny fananana na manofa fiara, mividy entana elektronika, maka ny sekoly tsara indrindra ho an'ny zanakao. Na ny sekoly tsara indrindra aza manokatra vaovao Dubai campus amin'ny taona manaraka.
Ny vidin'ny fiainana ao Dubai, Ho fantatrao ianao rehefa tonga any ianao toy ny expat a India. Amin'ny ankapobeny, izany dia lafo be te hipetraka any Dubai. Raha ny zava-misy dia mandra-pahatongan'ny expo 2020 dia miakatra ambonin'ny lanitra ny vidiny. Noho ny tetikasa vaovao tonga any Dubai. Ary maro kokoa kandidà nitady asa tany Emirà Arabo Mitambatra. Alohan'ny handehananao ny fanamarinana ny torolalana amin'ny antsipiriany sy ny vidiny fototra amin'ny vidiny monina any Dubai.
Banky any Dubai City
Miankina amin'ny kaonty banky any Dubai na i Abu Dhabi izay mifindra toerana dia mora. Amin'izany dia mila fepetra ny fepetra sasany toerana, miankina amin'ny banky daholo izany. Raha te-hanokatra kaonty banky mahazatra, mila ho mponina ao Dubai. Saingy rehefa ela ny ela, dia mamela ny banky sasany expats mponina hanokafana kaonty mitahiry. Saingy ao anatin'izany ny banky mpitantana mametraka fetra faran'izay kely indrindra tsy maintsy atao. Mila manome tahirin-kevitra ilaina ianao toy ny Pasipaoro misy antontan-taratasy momba ny fonenana, tany am-boalohany ary koa ny dika mitovy. Ary amin'ny tranga sasany, taratasy avy amin'ny mpampiasa anao. Momba izany indrindra, tsy misy tohanina avy amin'ny governemanta Emirates Arabo Mitambatra.
Carer ao amin'ny sehatry ny Banky any Dubai. Amin'ny lafiny iray, mihamafy kokoa. Almost every mpikaroka momba ny asa naheno momba ny bola ara-bola any Dubai. Indrindra, ny momba ny andrim-panjakana mitombo haingana be. Saingy tsy ny matihanina rehetra no manao an'io fomba io. Ohatra ny sasany amin'ireo orinasa matihanina amin'ny Dubai bankn'ny asa ao amin'ny Emirà Arabo Mitambatra. Tao anatin'ireny toe-javatra ireny, tsy maintsy fantatrao fa ny fahazoana karama any Dubai mihamitombo isan'andro ny andrim-panjakana.
Ohatra iray mba handefa tafatafa amin'ny mpandraharaha banky. Mila izany ianao Manome ny mari-pahaizana MBA mba hahazoany asa any Dubai. Amin'ny lafiny tsara, azonao atao ny manomboka hatrany ny asa amin'ny sasany amin'ny toerana fototra. Ohatra, mpanampy amin'ny mpivarotra na mpanamory vola. Amin'ny lafiny ratsy, raha tsy dia manana traikefa firy amin'ny banky ianao.
Ny mpikaroka asa vaovao dia tsy hokaramaina haingana araka izay noheveriny. Indrindra ho an'ny rehetra manaraka ny toerana fitantanana. Thomson Reuters ary Job Pro dia manakarama matihanina efa za-draharaha ny ampidiro ny averinao.
Ny fiteny ao Emirà Arabo Mitambatra
Mialà eo amin'ny manodidina ny 85% an'ny mponina ao Dubai izay ahitanao Mpilatsaka an-tsitrapo miteny Philippines. Ary koa ny Hindi sy Urdu ary Bengali. Ankoatra izany, Tamil, Tagalog, Persian, Chinese, Malayalam, ankoatry ny fiteny maro hafa. Ary na dia ny fiteny Arabo aza no fiteny ofisialy an'ny Emira Arabo Mitambatra, Anglisy no fiteny izay tena lahateny indrindra any Dubai. Araka izany, ny asa any Dubai azo atao toy ny ivon-draharahan'ny fiantsoana ivoho ao UAE.
Misy karazana arabo 4 ampiasaina any Dubai. Ary Maghrebi Arabo, Arabo Ejiptiana, Golà arabo ary Arabo Levantine. Saingy, ilay fiteny tena malaza indrindra amin'ny Dubai dia ny Arabo sy anglisy. Raha jerena ireo teboka ireo, azon'ny mpandahateny arabo rehetra fa misy ny Modern Standard Arabo. A complete torolalana ho an'ny fifindra-monina ao Dubai ve izany ho anao?.
Na tianao ny miteny amin'ny teny arabo na anglisy, dia azo antoka ny milaza izay manandratra miaina sy miasa ankehitriny tany Emirates. Na na mitsidika an'i Dubai ary mikasa ny hijanonay satria ianao mitady Dubai Jobs. Amin'ny lafiny iray, raha miteny anglisy ianao. dia tsy hahatsapa ny fahasarotana mifandray amin'ny mponina ao an-toerana na amin'ny hafa.
Ao amin'ny Emirà Arabo Mitambatra, misy ihany koa ny goavana raharaham-barotra etika ilainao hanaraka toy ny fizahan-tany fizahan-tany. Raha ny zava-misy dia mila mianatra mianatra Anglisy ianao. Indrindra raha maniry ny hanomboka hiasa eo amin'ny sehatra fitantanana ianao. Raha ny marina dia tsy Dubai na Abou Dhabi akory no izy. Mila manana traikefa be dia be ianao raha tianao ny miasa any ivelany any Dubai indrindra amin'ny raharahambarotra.
Toetrandro ny toetrandro tany Dubai
Alohan'ny hifindrana mankany Dubai, expats dia tokony hahafantatra fa mafana ny tanàna. Mandritra ny fotoana rehetra ny volana aogositra dia mafana indrindra volana tany Dubai miaraka amin'ny hafanana 36 ° C (96 ° F). Raha ny volana janoary kosa dia ekena ho volana mangatsiaka indrindra amin'ny taona izay manana mari-pana mahatratra 19 ° C (66 ° F). Tena sarotra izany mankafy fitsangatsanganana amin'ny zaridainam-panjakana na manaram-bary amin'ny kaopy kafe. Mba hametrahana azy amin'ny fomba hafa, ivelan'ny trano iray no hafanana mafana. Iza ka sarotra ho an'ny mponina ny mankafy fivoahana ivelany. Mpandeha amin'ny fantsom-pifandraisana misy na aiza na aiza ary izany no antony Manoro hevitra ny mpitsoa-ponenana rehetra sy ny mponina isika manana palitao ho azy ireo satria miha-maizina ao anaty trano io.
Ny toetr'andro indrindra indrindra any Dubai sy Abu Dhabi. Amin'ny ankapobeny dia andro fialan-tsasatra mandritra ny taona ity. Izay rehetra efa nitsidika ny UAE dia mahalala Dubai dia toerana mahagaga hiainana. Ny Weather dia tsara fotsiny raha milomano sy miantsena fotsiny. Zava-mahagaga iray mety hitanao ao an-drenivohitra Emirates Arabo Mitambatra. Toerana feno habakabaka any Abu Dhabi na Pôlisy ara-panatanjahantena mahavariana any Dubai. Mahagaga fotsiny ny olona rehetra te-manandrana. Izahay dia natolotry ny mpitsidika vaovao hanandrana. Indrindra ho an'ny fahavaratra, ny Emirat dia fialan-tsasatra tsy misy fiafarany amin'ny lanitra masoandro.
Ary na mitsidika an'i Dubai ianao amin'ny raharaham-barotra na fahafinaretana, maniry fotsiny ny hanandrana ny antsoina hoe ”ny rehetra”Experience an'ny Dubai". Raha te hahalala ahoana ny any Dubai manana endrika sy manambana WhatsApp Vondrona asa.
Fanamboarana toaka ao Emirates
Maro no mihevitra fa ny alikaola dia miely patrana ao amin'ny emirate an'i Dubai. Fa ny zava-misy dia ny fisotroana toaka eo imasom-bahoaka dia tsy ara-dalàna miaraka amin'ny sazy mety hahatratra ny fonja. Raha jerena ireo isa ireo dia misy alikaola any emirate ao Dubai dia avela any amin'ny hotely, bar ary trano fisakafoanana sy trano fivarotana manokana ihany.
Dubai City , mazava ho azy, ny fivavahana silamo, ka tsy avela be loatra ny alikaola. Na dia toa ianao fitadiavana asa any Emirates. Afaka manentana ny tenanao fotsiny ianao toy ny fanaon'ny ankamaroan'ny mpitady asa any amin'ny firenena hafa. Mandehana fotsiny amin'ny pub sy mahazo misotro rano. Misy fameperana be dia be hafa ao amin'ny United Arab Emirates fa mila miambina ianao vao manomboka. Amin'ny lafiny iray, azonao atao Google izany. Ary raha sendra hahita olana ianao dia afaka miresaka foana polisy. Amin'ny lafiny tsara, tokony ho tsara ihany izany raha mandeha fotsiny ianao ary mitsidika an'i Dubai fotsiny.
Ny torolàlana feno momba ny nifindra tany Dubai dia ho anao ve ?. Azo antoka ve fa tsy mampiasa zava-pisotro misy alikaola ?. Vonona ho an'i Dubai ve ianao?.
Fitateram-bahoaka sy ny tanànan'i Dubai
Amin'ny ankapobeny, ny metro ao Dubai dia matetika feno hipoka amin'ny mpandeha mandritra ny ora maika. Rehefa miverina amin'ny taxi amin'ny fotoana tena tsara indrindra raha te hihazo haingana dia haingana amin'ny alina izay tsy sahirana ny lalana. Na izany aza, tokony ho fantatrao fa na mandeha fiara na taxi; amin'ny ora zoma hariva sy amin'ny asabotsy, indrindra ny manodidina ny tranombarotra miantsena, ny mpizahatany, ary ny tora-pasika ara-bola tsena. Ary koa raha ianao mikasa ny ho lasa vehivavy mipetraka any Dubai. Mila mahafantatra fitsipika sasany mety hampiharina aminao ianao.
Dikany hafa fitaterana eo an-toerana any Dubai no Tram izay nampidirina tao 2014. Amin'ny maha-rafitry ny rafi-pitateram-bahoaka mody any Dubai. Ny Tranon'i Dubai dia manome mpandeha mora ny fidirana amin'ireo toerana lehibe rehetra ao an-tanàna. Toy ny Jumeirah Beach Residence, Dubai Marina, ny orinasa faritra sy làlana Al Sufouh. Marihina fa ny Dubai Tram dia mifandray ihany koa amin'ny gara metro. Amin'ny lafiny tsara, afaka miresaka amin'ny olom-pirenena maro hafa ianao. Izay tokoa no mitsidika ny UAE. Ohatra, afa-tsy ho an'ny Indiana, be dia be Afrikana Tatsimo ao Dubai. Azonao atao ny miresaka amin'ny olona any amin'ny Emira Arabo Mitambatra amin'ny teny Anglisy.
Ao ny Dubai Ferry ary koa ny fitaterana fizahan-tany. Midika izay mamela mpitsidika hizaha ny tanàna avy any an-dranomasina ary miketrika eny amin'ny làlan-javany mahafinaritra sy ireo sary mahafinaritra. Misy betsaka job marketing any Dubai nataon ny Governemanta UAE. Mazava ho azy fa hampiroborobo io tanàna mahavariana io. Tanjona ny hitondrana mpitsidika maro kokoa any Abu Dhabi sy Dubai.
Ahoana no fomba hitadiavana asa any Dubai ho vahiny?
Ny fanadinoina nanakarama tany Dubai toy ny expat vaovao. antoka, mpitady asa vaovao mila miasa isan'andro. Miala fotsiny mba hahazo tolotra asa. Etsy ankilany, misy ny fandraisana mpiasa maro tolotra izay azonao ampiasaina mba hahitana asa any Dubai. Mazava ho azy fa tsy mofo mora mahita asa ao Dubai. Betsaka ny olona ao anatin'ny UAE. Iza no maniry hahita fahafahana miasa betsaka miaraka amin'ny Dubai City Company? Izany no antony Ny asa any ivelany any Dubai Tena malaza izany.
Fomba iray malaza amin'ny fitadiavana asa any UAE. Hankany an-tanàna, ary mikaroka fanadihadiana mandeha an-tongotra ao Dubai. Ny mpanjifanay dia manoro hevitra mafy ny tava mifanatrika amin'ny resaka mpikarakara mpandraharaha. Satria raha afaka mivarotra ny tenanao amin'ny mpikarakara mpikarama ianao. Amin'ny ankamaroan'ny tranga, ianao handresy ny lalao fandraisana andraikitra.
Vondrona WhatsApp ao Dubai
WhatsApp Mitombo haingana be ny vondrona Recruitment Group isan'andro. Jobs in Dubai ho vokatry ny fitomboany finday fandraisana fanampiana fanampiana amin'ny 50,000 mpitady asa any UAE. Ny ekipanay dia namorona a asa mitady vondrona ao Dubai. Miaraka amin'ny fiheverana ny fanampiana mpikatsaka asa izay mikasa ny hiasa any ivelany any Dubai. Indrindra raha toa ka maniry izy ireo napetraka tao amin'ny Emira Arabo Mitambatra. Ka toy ny efa namakianao ny torolàlana ho anay tany Dubai. Tokony hanandrana hiditra izao ianao nofinofy. Dubai City dia iray amin'ireo toerana tsara indrindra hivelomana. Ka maninona moa raha manandrana mandefa sy mandefa ny rindranasa momba ny asa. Dubai City Company ekipa fandraisana mpiasa. dia Manampy ny mpitsoa-ponenana foana. Etsy andaniny, tokony hijery mpikarakara orinasa ihany koa ianao. Careerjet ary Gulf Monster. Tena mendrika ny hampiharina amin'ny CV anao izy ireo.
Fitsipika feno ho an'ny fifindra-monina ao Dubai dia tsara ho an'ny WhatsApp ?.
WhatsApp dia tokony hamerina any UAE
Ity dia torolalana feno ho an'ny fifindra-monina ao Dubai ho anao !.
Ao amin'ny Emira Arabo Mitambatra. Ianao dia afaka mahita vondrona mpiasa any Eropa any Polonina koa. Forum manokana ho an'ireo mipetraka any UAE. Na dia afaka mahita antokon'olona vitsivitsy aza ianao. Aiza no ahafahanao mahazo toro-hevitra momba ny dingam-panamboarana ao an-drenivohitry ny Emira Arabo mitambatra. Amin'ny lafiny tsara, iray amin'ny fomba mahazatra Tolotra fitadiavana finday ho an'ireo mitady mpiasa any Dubai.
Fitsipika feno ho an'ny fitadiavana orinasa iray mpikarakara tsara ao Dubai. Ity no fomba iray raha te hahita karama fanombohana ianao any UAE. Vondrona WhatsApp dia iray amin'ireo tsara indrindra hitady asa any UAE. Fa ianao afaka mahita fijery anay Afeno ny famerenana mankany amin'ny fizarana haingana indrindra eto an-tany. Izany dia azo antoka fa feno mpitari-dalana ho any Dubai.
Ahoana no hahitana ny mpampiasa tonga lafatra indrindra ao amin'ny Emirates
Misy koa fomba vitsivitsy hitadiavana asa any UAE. Nefa miaraka amin'izany Indians ao Dubai. Misy koa ny firenena hafa izay mitady asa ao amin'ny Emirates. Ohatra, Pakistane izay mitady asa any Dubai. Mahavita mahazo asa amin'ny alàlan'ny fampiasana serivisy any UAE. Mitady mpampiasa any amin'ny United Arab Emirates. Manjary ho asa sarotra indrindra aloha expo 2020.
Ekipanay manokana miara miasa amin'ny expats vaovao. Noho ny tetikasa Expo 2020, tokony hanao zavatra haingana ianao ahazoana asa.
Dubai City Company dia manana Ireo asa azo alaina any Dubai sy Abou Dhabi izay azonao alefa CV. Ataovy azo antoka fa handefa ny antsipirianareo vaovao amin'ny orinasa izahay. Ankoatra izany, Dubai dia tonga ara-dalàna indrindra any amin'ny faritra midadasika indrindra any Moyen-Orient.